ငွေကြေးကြွယ်၀မှုနဲ့ ကိုယ်လက် ကြံ့ခိုင်မှု ဘယ်လို ဆက်စပ်နေသလဲ - BBC News မြန်မာ
ငွေကြေးကြွယ်၀မှုနဲ့ ကိုယ်လက် ကြံ့ခိုင်မှု ဘယ်လို ဆက်စပ်နေသလဲ
15 စက်တင်ဘာ 2018
Image caption ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုက ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးကြီး
ယူဂန်ဒါ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်လက် ကြံ့ခိုင်မှု အရှိဆုံးလို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ရဲ့ လတ်တလော ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
ဂျနီဖာနာမူလမ်ဘွား ဆိုရင် အလုပ်ဆီကို တနေ့ တနာရီခွဲ လမ်းလျှောက်တာကို တပတ် ငါးကြိမ်လောက် လုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ အလုပ်လုပ်တဲ့ သုံးထပ်ရှိတဲ့ အဆောက်အအုံမှာ အသက် ၃၄ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဂျနီဖာ ဟာ တနေ့ကို နှစ်နာရီလောက် သန့်ရှင်းရေး လုပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တနေ့ကုန် သူ့အထက်လူကြီး ခိုင်းသမျှ တောက်တိုမယ်ရ လုပ်ပြီး ညနေ ငါးနာရီ ထိုးတဲ့ အခါ လာရာ လမ်းကြောင်း အတိုင်း လမ်းလျှောက် အိမ်ပြန်တယ်လို့ ဂျနီဖာက ဆိုပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ ဒီလမ်းခရီးကို ဝေးတယ်လို့ မထင်သလို အလုပ်သွားရင် ဘယ်တော့မှလည်း ဖိနပ် ကောင်းကောင်း စီးမသွားဘူးလို့သူ့ရဲ့ ဖုန်တွေ သဲတွေ ပေနေတဲ့ ခြေညှပ် ဖိနပ်ကို ပြရင်း ဂျနီဖာက ပြောပါတယ်။
Image caption တနေ့ တနာရီခွဲ လမ်းလျှောက်အလုပ်သွားတဲ့ ဂျနီဖာ နာမူလမ်ဘွား
တကယ်တော့ သူ အခုလို လမ်းလျှောက် အလုပ်ဆင်းရတာဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစား လှချင်လို့ မဟုတ်ဘဲ ငွေကြေးကြောင့် အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ လစာက တလကို ဒေါ်လာ တစ်ရာ စွန်းစွန်းလေး ရတာ ဖြစ်ပြီး အိမ်မှာ လိုအပ်တာ ဝယ်ရင်း ကလေး နှစ်ယောက် ကျောင်းတက်ဖို့ စရိတ်တွေ ပေါင်းလိုက်ရင် သူ့အနေနဲ့ ခရီးစရိတ် ချိုးချန် ချွေတာရမယ့် အခြေအနေကို တွန်းပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနက် ခုနှစ်နာရီ နေရောင်ခြည်နဲ့ အတူ မီးရထားလမ်း အတိုင်း လမ်းလျှောက် အလုပ်သွားကြတဲ့ လူတန်းရှည်ကြီးကို ယူဂန်ဒါ မှာ အလွယ်တကူ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ အထဲက ကလေးသုံးယောက် ဖခင် ဟော်တယ် ဝန်ထမ်း Oprus Aduba တယောက်လည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
နဖူးပေါ်က စီးကျလာတဲ့ ချွေးတွေသုတ်ရင်း ဒီလို လမ်းလျှောက်ပြီး အလုပ်ဆင်းကြတဲ့သူတွေ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာပြီလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ကိုယ့်လက် လှုပ်ရှားမှု အရှိဆုံး တိုင်းပြည်တွေထဲမှာ ယူဂန်ဒါဟာ ထိပ်ဆုံးကပါတယ်လို့ ကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
Image caption ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု အညွန်းကိန်းပြပုံ
ဆန်းစစ် လေ့လာချက်တွေ အရ ယူဂန်ဒါမှာ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု နည်းသူ ၅.၅%သာ ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ရင် မိုဇမ်ဘစ် ၊ တန်ဇန်းနီးယား ၊ လီဆိုသို နဲ့ တဂိုးတို့ဟာလည်း အထိုက်အသင့် ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်သူ ပေါများကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့နဲ့ နှိုင်းဆ ကြည့်ရင် ကူဝိတ် ၊ အမေရိကန် ဆာမိုဝါ ၊ ဆော်ဒီ အာရေဗျ နဲ့ အီရတ်က လူတွေဟာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား သိပ်မရှိၾဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Image caption ကားတွေ ရထားတွေ အစား စက်ဘီးစီးတာကလဲ ကျန်းမာရေး အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေ
လူမှုနေထိုင်တဲ့ ပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆက်စပ်မှု ရှိလား ။
အထူးသဖြင့် ၀င်ငွေနည်းတဲ့ တိုင်းပြည်က လူတွေဟာ ငွေကြေး ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံက လူတွေထက် ပိုပြီး ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု အပြည့်အဝ ရှိကြတယ်ဆိုတာ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
နွမ်းပါးသူတွေဟာ အများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုရတာ ၊ အလုပ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်လက် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေ လုပ်ရလေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယူဂန်ဒါက လူတွေဟာ ဘာကြောင့် အလားတူ ၀င်ငွေ ရရှိတဲ့ တခြားက လူတွေထက် ပိုပြီး ကိုယ်လက် တောင့်တင်း ကျန်းမာမှု ရှိသလဲ သလဲ ဆိုတာ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေ အဖြေရှာမရသေးပါဘူး။
၀င်ငွေ နည်းနည်းဘဲ ရတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင် ရုံးဌာနမှာ လုပ်သူတွေဟာ ရုံးတွင်းမှာ အထိုင်များ ၊ ကားတွေ ၀ယ်ပြီး သွားလာကြတဲ့ အပြင် Fast food လို အသင့်စားနိုင်တဲ့ စားကြတဲ့ အတွက် ယူဂန်ဒါက လူတွေလောက် ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်မှု မရှိတာလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ အတွက် ယူဂန်ဒါ ပြည်သူတွေလည်း တနေ့မှာ ချမ်းသာလာရင် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုနည်းလာကာ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်သူ နည်းသွားနိုင် ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့ရဲ့ တိုက်တွန်းချက် ဖြစ်တဲ့ လူတယောက်ဟာ တပတ်မှာ ၇၅ မိနစ် ခပ်ပြင်းပြင်း ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု လုပ်ပေးတာ ၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်နာရီခွဲလောက် သိတ်မပြင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးဖို့ လိုတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ကန်ပါလာ့ က လူတွေကတော့ ဖြုံတောင် မဖြုံဘဲ သူတို့အတွက် ဒီလောက်ဟာ ထမင်းစား ရေသောက်လို ဖြစ်နေပါတယ်။
Image caption ယူဂန်ဒါ ပြည်သူတွေ ကျန်းမာရေး ကမ္ဘာထိပ်ဆုံးကပြေး
အသက် ၁၉ နှစ် ကနေ ၆၄ နှစ် အတွင်း ဘယ်လို လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်သင့်လဲ ။
၁. တပတ်ကို နှစ်နာရီခွဲ လောက် မပြင်းထန် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား မှု လုပ်ပေးပါ ဒါမှမဟုတ် တနာရီ ၁၅ မိနစ်လောက် ခုန်ပေါက်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။
၂.ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေးပါတဲ့ ကြွက်သား အားလုံး အတွက် တပတ်မှာ နှစ်ရက် ဒါမှမဟုတ် အဲဒီထက် ပိုပြီး ကြွက်သား အားကောင်းစေတဲ့ အကြောဆန့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေးပါ။
၃. အကြာကြီး ထိုင် အလုပ်လုပ်နေဘဲ ခဏခဏ လမ်းထလျှောက်တာမျိုး ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိစ္စတွေလည်း လုပ်ပေးပါ ။